युट्युब चलाएर लखपति बनौं - प्रविधि - साप्ताहिक
घरमा आमाले बोकेको सामसुङ ग्यालेक्सी एस मोबाइलसम्बन्धी भिडियो बनाएर एक्सप्लोर ग्याजेट्स नामक इलेक्ट्रोनिक्स ग्याजेट्सहरूको समीक्षा गर्ने युट्युब च्यानल प्रारम्भ गर्ने प्रभात यादव हुन् वा आमा–बुवाबाट भिडियो क्यामेरा गिफ्ट पाएर सामाजिक मुद्दाहरूमा आधारित भिडियो बनाएर चर्चित भएका आयुष रिमाल हुन् वा सामाजिक सञ्जालमा चलेको ट्रेन्डमा आधारित भिडियो बनाउने र्‍यान्डम नेपाली नै किन नहुन्, युट्युबका माध्यमबाट कमाइ गर्ने नेपालीहरूको सूची दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ । यो सूचीमा कुनै दिन तपाईंको नाम पनि हुनसक्छ, त्यसका लागि आवश्यक छ त केवल विषय, क्यामेरा र स्मार्टफोन अनि भिडियो एडिटिङसम्बन्धी सामान्य ज्ञान र प्रबल इच्छाशक्ति ।
 ५ वर्षअघि आफ्नी आमाले बोकेको मोबाइल रुट गर्ने र भिडियो बनाउने फुर्सद नहुँदो हो वा त्यो फुर्सद उनले युट्युबमा खर्च नगरेका हुन् त, अहिले एक्सप्लोर ग्याजेट्सका प्रभात यादव युट्युबबाट मासिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ कमाइ गर्ने पौरखी नेपाली युवामा दरिँदैनथे ।
 २०१३ मा आयुष रिमालले आफ्ना आमा–बुवाबाट भिडियो क्यामेरा उपहार प्राप्त गरेपछि युट्युबमा समय र स्रोत खर्चने सोच नबनाएको भए उनले अहिले युट्युबकै माध्यम प्रयोग गरी मासिक १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म कमाउन सक्दैनथे ।
 युट्युबमा प्य्रांकस्टर रिभाइभल तथा नेपाली प्य्रांकस्टर जस्ता च्यानल चलाउने युवाहरूको समूहले अहिले मासिक ६० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ कमाइरहेको छ ।
 सिसन बानियाँ, किछि भ्लग्स, जेम्स श्रेष्ठ, भिजे म्युजिक, र्‍यान्डम नेपाली, बिस्ट अफिसियल आदि च्यानलमार्फत पनि नेपाली युवाहरूले घर बसी–बसी लाखौं कमाइ रहेका छन् ।
घरमै बसेर युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्ने नेपालीहरूको संख्या बढ्दो छ । केहीले गीत गाएर, केहिले विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री अनि केहीले हास्यव्यंग्यात्मक भिडियोहरू राखेर च्यानल सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
कहीँ–कतै जागिर खान नगई घर बसी–बसी मासिक लाखौं आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नपत्याउनेहरूको जमात ठूलै छ नेपालमा, तर यो वास्तविकता हो । हामीले सधैं भिडियो हेर्न प्रयोग गर्ने युट्युबमा केही प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्न सकियो भने घर बसी–बसी राम्रो कमाइ गर्ने कुरा असम्भव छैन ।
कसरी कमाउन सकिन्छ र कसरी काम गर्ने ?
सर्वप्रथम त तपाईंसँग युट्युब च्यानल हुनु आवश्यक छ । युट्युबमा गएर नयाँ च्यानल बनाउनुहोस् र उक्त च्यानलमा भिडियोहरू राख्नुहोस् । यसमा अरूको भिडियो चोरी गरेर राख्नु हुँदैन । त्यसो गरे प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानुनका कारण तपाईंको भिडियो त युट्युबबाट हट्छ नै, तपाईंको च्यानल नै प्रतिबन्धित हुने सम्भावनासमेत हुन्छ । बरु तपाईंले कुनै निश्चित विषयसँग सम्बन्धित रहेर नियमित रूपमा भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ  । स्मार्टफोनको स्मार्ट जमानामा अहिले तपाईंलाई भिडियो बनाउन त्यत्ति गाह्रो पनि नपर्ला ।
भिडियो बनाउँदा दर्शकको रुचिलाई मध्यनजर गर्नुहोस् दर्शक कस्ता प्रकारका भिडियो रुचाउँछन् भन्ने कुरा अध्ययन गरेर त्यही रुचि समेट्ने गरी भिडियो बनाइयो भने नियमित रूपमा राम्रो दर्शक संख्या प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
भिडियो बनाएर युट्युबमा अपलोड गरिसकेपछि त्यसलाई मनिटाइज गर्न आफ्नो च्यानलमा कम्तीमा १० हजार भ्युज हुनु आवश्यक छ, यसका साथै आफू  युट्युब पार्टनर प्रोग्रामसँग पनि जोडिनुपर्छ ।
जब तपाईंले आफ्नो च्यानलमा १० हजार भ्युज पुर्‍याउनु हुन्छ, तब युट्युबले तपाईंको भिडियो आफ्नो नीतिअन्तर्गत छ कि छैन भनेर जाँच गर्छ । यदि सबै कुरा ठीक छ भने तपाईं युट्युब पार्टनर बन्नुहुनेछ भने तपाईंका भिडियोहरूमा विज्ञापन पनि आउन थाल्नेछन्  ।
यसरी सेटअप गर्नुहोस् युट्युब च्यानल च्यानल बनाएर युट्युब पार्टनर प्रोग्राममा जोडिन आवेदन दिनुपर्छ । याद गर्नुहोस्, युट्युब पार्टनर प्रोग्रामको रिभ्यु हुन आफ्नो च्यानलको भिडियो लाइफटाइममै कम्तीमा १० हजार पटक हेरिएको हुनुपर्नेछ ।
युट्युब पार्टनर प्रोग्राम हाल नेपाल लगायत विश्वका केही देशमा उपलब्ध नभएकाले च्यानल लोकेसनमा युट्युब पार्टनर प्रोग्राम हुन उपयुक्त देश छान्नुपर्ने हुन्छ । च्यानलमा विज्ञापन आएर मनिटाइज भएको भिडियोबाट कमाउन युट्युब च्यानललाई एडसेन्स एकाउन्टसँग कनेक्ट गराउनुपर्छ ।
यति गरेपछि मनिटाइज विथ एड्स छानेर कस्तो प्रकारको विज्ञापन राख्ने हो छान्नुहोस्, यो कामका लागि भिडियो म्यानेजरको युट्युब स्टुडियो एपमा जानुपर्ने हुन्छ । अब नियमित रूपमा भिडियोहरू अपलोड गर्नुहोस् ।
कसरी बढाउने दर्शक ?
दर्शक बढाउन सर्वप्रथम दर्शकको चाहनाअनुसार भिडियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । कुन समयमा कस्तो प्रकारको भिडियो दर्शकले रुचाउँछन् भन्ने कुरा अध्ययन गरेर काम गरियो भने अवश्य नै राम्रो संख्यामा दर्शक प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
युट्युबमा खोज्दा आफूले तयार पारेको भिडियो तुरुन्तै फेला पर्नुपर्छ । कुन शब्द खोजेर दर्शकहरू आफ्नो च्यानलमा आइरहेका छन्, त्यहीअनुसार भिडियोको टाइटल (शीर्षक) तथा डिसक्रिप्सन राख्दा पनि धेरै दर्शकले चाँडै फेला पार्ने भिडियो दिन सकिन्छ ।
भिडियो युट्युबमा राख्दा थम्बनेल र आकर्षक शीर्षक राख्नुपर्छ । भिडियोको थम्बनेल र शीर्षकले नै दर्शकहरूलाई भिडियो हेरौं कि नहेरौं भनेर निक्र्याैल गर्न मद्दत गर्छ । एक पटक आएका दर्शकलाई आफ्नो च्यानलमा लामो समयसम्म टिकाउन प्ले लिस्ट बनाउन सकिन्छ । यसले आफ्नो च्यानलको लोकप्रियता बढाउन थप सहयोग गर्छ ।
कस्ता भिडियोबाट कमाउन मिल्छ ?
युट्युबमा चलेको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने मुख्य दुई किसिमका च्यानल निकै अगाडि छन् । पहिलो जल्दो बल्दो विषयमा रहेर बनेका भिडियो, जसले छिट्टै युट्युब प्रयोगकर्तामा सकारात्मक वा नकारात्मक सोच निर्माण गर्छ र प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको उत्तेजना प्रकट गर्न प्रेरित गर्छ । दोस्रोमा जानकारीमूलक च्यानलहरू ।
पहिलो किसिमको च्यानल सामान्यतया छोटो समयका लागि हेरिन्छ । यस्ता च्यानलले छोटो समयमै प्रशस्तै कमाएको पनि पाइन्छ, तर शीर्षकको अभाव, सामाजिक मूल्य–मान्यतामा आँच पुर्‍याउन सक्ने सामग्री आदि हुनसक्ने हुनाले यस्ता च्यानल लामो समय टिक्दैनन् ।
दोस्रो किसिमका च्यानल भने जानकारीमूलक र प्रयोगकर्ताका प्रिय हुन्छन । समाचार, छोटो हास्य कार्यक्रम, विभिन्न सामग्रीहरूको समीक्षा जस्ता भिडियो नियमित अपलोड गर्दा च्यानल सधैंभरि टिक्ने खालको हुन्छ । किनभने भिडियोका लागि यस्ता विषयको कहिल्यै कमी हुँदैन ।
खास गरी नेपालका प्रयोगकर्ता भन्दा अरू देशमा बस्ने प्रयोगकर्ताले भिडियो हेर्दा बढी आम्दानी हुन्छ । यसको कारण नेपालमा युट्युबले देखाउने विज्ञापनको संख्या थोरै हुनु तथा विज्ञापनको मूल्य सस्तो हुनु हो । त्यसैले, राम्रो आम्दानी गर्ने हो भने विदेशी प्रयोगकर्ताको रुचि अनुकूलका भिडियो तयार पार्नुपर्छ ।
च्यानल सञ्चालन गर्न अरू काममा झैं धैर्यता, लगनशीलता एवं मेहनत त आवश्यक हुन्छ नै, त्यसका साथै विशेष क्षेत्रको ज्ञान वा तपार्इंकै कुनै सोख, जस्तै तपाईंले खेल्ने कम्प्युटर वा शारीरिक खेल, खाना बनाउने सोख, विभिन्न ठाउँ घुम्ने सोख आदिले ठूलो मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । यस्तो कामका लागि मौलिकता एवंं सिर्जनशीलताले पनि उत्तिकै भूमिका खेल्छन् ।
पाँच ठूला निर्णय